कोरोनाले उब्जाएका कुरा - Jhilko
कोरोनाको महामारी ढिलोचांडो सकिएर जान्छ । प्रकृति संग संघर्ष गर्दै आएको मानव जातिको क्षमताको कारण यसले धेरै दिन दुख नदेला । यो हामिबाट जांदै गर्दा यसले हामिले रोजेको विकासको मोडल, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो सामाजिक संस्कार र जिवनपध्दती, हाम्रो वातावरण, हाम्रो मनोविज्ञान, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा कस्तो प्रभाव छोड्ला त ?
कोरोनाले गर्दा धेरै युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश जान पाएका छैनन् । यो महामारीले छोडेर जाने विश्वव्यापी आर्थिक मन्दिका कारण विदेशतिर उध्धोग कलकारखाना बन्द भए भने अथवा केही समयका लागि तिनिहरुको आर्थिक अबस्था कमजोर भयो भने त्यां काम गर्ने नेपाली युवाहरु बेरोजगार बन्नेछन् र घर फर्किनेछन् । त्यतिबेलाको बेरोजगारी र रेमिट्यान्सको कमिलाई हामिले कसरि व्यवस्थापन गर्न सक्छौ ?
नेपालमा गाउलाई सहरले निल्दै गएको छ । पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको छ । हाम्रो जिवनपध्दतिको मौलिकता हराउदै गएको छ । यस्तोमा अहिले कोरोनाले सामाजिक दुरी कायम गर्न हामिलाई बाध्य पारेको छ । यो महामारीपछि हाम्रो सामाजिक मुल्य र जिवनपध्दतिको मौलिकतालाइ जोगाउन हामिले गर्नसक्ने काम केही हुनसक्छ कि सक्तैन ?
कोरोनाले कृषि क्षेत्रमा चुनौति संगै अबसर पनि ल्याएको छ । समृद्ध नेपाल, सुखि नेपालीको अवधारणाले जिविकामुखी कृषिलाई व्यवसायमुखी आधुनिक कृषिमा बदल्ने र कृषि उपजको उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने संकल्प लिएको छ । योसंगै हामीले अग्र्यानिक उत्पादनबारे पनि सोच्नुपर्ला । कोरोनाको कारण कृषि उत्पादनको आयात साघुरिएको यो समयलाई हामि कृषि क्षेत्रको विकास गर्नेगरी उपयोग गर्न सक्छौ कि सक्तैनौ ?
सत्यलाई लखेटने र लखेटिने क्रम चल्दै आएको छ । चल्दै पनि जाला । आफु नांगिएर अरुलाई नंग्याउने दाउपेच चल्दै गर्दा हामिले महामारीपछि अपनाउनुपर्ने बाटोबारे सोच्न, सुझाव दिन पनि ध्यान दिए राम्रै होला कि ?
(निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको फेसबुकबाट साभार)
चीनले दिएकोे कोरोना रोकथाम सहयता सामग्री नेपाल भित्रदै
सामान जाँचपासका लागि जाँचपासमा संलग्नहरुले मेडिकल प्रोटोकलको पालना गर्दै मालवस्तु...
रक्तश्रावसहित जटिल स्थितिमा सुत्केरी भएर छटपटाइरहेकी स्थानीय ३५ वर्षीया सुपारी बिकलाई...